Izimpohlo zijabuliswa i-Slay Queen Cleaning Services | Scrolla Izindaba
Izimpohlo zijabuliswa i-Slay Queen Cleaning Services
URefiloe Jawa wakhulelwa eneminyaka eyi-16 futhi walwisana nengcindezi yokuba ngumqwayizi.
Njengamanje, usendleleni eya empumelelweni ngebhizinisi lakhe elithandwa kakhulu i-Slay Queen Cleaning Services.
Udabuka elokishini laseZwide e-Port Elizabeth, uqale ibhizinisi lakhe ngonyaka owedlule eGoli kodwa selikhule ngokushesha okukhulu kunalokho obekulindelekile.
URefiloe oneminyaka engama-26, utshele abakwa-Scrolla.Africa: “Ngesikhathi ngikhulelwa ngineminyaka eyi-16 ngenza umatikuletsheni, ngangicabanga ukuthi ukuphela komhlaba kimi.
“Kodwa ugogo wami uDora Jawa oneminyaka engama-78, wangikhuthaza ukuthi ngingayeki futhi wayinakekela indodakazi yami.
“Ngabeletha kusasele amasonto amabili ngaphambi kokuhlolwa kwezivivinyo futhi ngaphasa nge-diploma.”
Yize anqoba kahle ezifundweni zakhe, uRefiloe wabe esebhekana nengcindezi enkulu: “Ngingumuntu unemibono eminingi”. Kodwa kwakungelula ukufeza lawo maphupho ngoba abesilisa babehlala njalo becela ukuncengwa ngokocansi futhi ngangingakwazi ukudayisa ngomzimba wami.”
I-Covid imvulele iminyango.
“I-Covid idinga inhlanzeko.
Yonke imindeni ifuna ukuhlanzwa kwezindlu okujulile kanye nokufuthwa kwamagciwane.
Ngabe senginquma ukungena ebhizinisini lokuhlanza ngendlela ethandekayo futhi enesitayela.
Ukuba intombazane ngedwa emndenini wabantu abayisishiyagalombili, bekuhlala kungenza ngilwele indawo yami.
Ibhizinisi lami likhule ngokushesha okukhulu ngoba nezinsiza zami ziyatholakala eKapa.”
Akumangazi ukuthi i-Slay Queen Cleaning Services inesisekelo esikhethekile samakhasimende!
URefiloe uthi, “Ixhaswa kakhulu ngabesilisa, ikakhulukazi laba abayizimpohlo.
“Senza wonke umsebenzi wasendlini, ikhasimende noma imboni yezinkampani ezikufunayo. Siya-ayina, sipheke, sikhuhle ukhaphethi kanye nokufutha amagciwane..
“Sigqoka umfaniswano omfushane, sicobe i-lipstick bese sifaka namawigi. Kepha ubuhle bubodwa abenele. Kumele ukwazi ukuhlanza,” kusho uRelifoe.
Ibhizinisi alijwayele ukuxhaswa ngabesifazane kodwa kuyinjongo kaRefiloe ukusiza.
“Abesifazane abawuthandi umisebenzi wethu ngoba basatshiswa ubukhona bethu.
“Umfaniswano wethu uyahehana kodwa asiluniki ucansi. Igama lebhizinisi lami lidonsa amehlo futhi lenza wonke umuntu abe nelukuluku ngoba lihlale lihlotshaniswa nezinto ezimbi,” kusho uRefiloe.
URefiloe uthe uyaziqhenya ngempumelelo yakhe.
“Muva nje ngivuselele indlu kagogo enamagumbi amane yaba namakamelo ayisishiyagalolunye. Lesi bekuyisibonakaliso sami sokubonga ngeziyalo nokuzimela. Kodwa ngifuna inkampani yami ithuthukise abesifazane abaningi ikakhulukazi endaweni yangakithi entulayo.”